I-Aries kunye ne-Aries-Ukuhambelana kwiSini, uthando kunye noBomi - Iiary
Aries kunye Aries
Ukuhambelana kwe-Aries kunye ne-Aries kuThando, uBomi, isondo, unxibelelwano, ubuhlobo kunye nokuthembana. x
Aries & AriesUkuhambelana ngokwesondo kunye nobudlelwane obusondeleyo
Ngokuzihlonela kwabo kujolise kubuntu obuphezulu nobomeleleyo, kulula ukuba aba babini bakhulule iimpahla zabo kwaye bonwabe omnye komnye. Eyona ngxaki inkulu isenokuba kukuzingca kwabo. Ekubeni imvisiswano yezesondo mhlawumbi yeyona nxalenye ibalulekileyo yobudlelwane kumqondiso wabo olawulwa nguMars, oku kunokukhokelela kwimilo kunye nokutshintshiselana kwamagama amaninzi abukhali.
Eyona meko imbi kakhulu kukuba omnye wabo ucinga kakhulu malunga nokwaneliseka komnye, ngelixa omnye engenalwazi ngeemfuno zeqabane lakhe eliphayo. Kuba iMars iyiplanethi eqhagamshelwe kwisini njengendlela yokuqhubeka nohlobo, kuqhelekile ukuba amaqabane amabini e-Aries aswele amandla okwanelisa omnye komnye ngendlela yenkanuko, yeVenus. I-Mars iya kumela ukwaneliseka kwingqondo yomzimba, kodwa akukho Venus - akukho mvakalelo. Ke ngoko, kunokubakho ukunqongophala konxibelelwano lokwenyani lomntu kweli candelo lobudlelwane. Iingcinga zabo kufuneka zijike kwiqabane labo ngaphandle kokukhetha ukuba baceba ukuba ubudlelwane babo bezesondo busebenze.
Aries & AriesThembela
Kukho indlela yokuziphatha ethile Aries oko phantse kusoloko kubonisa ukuba abathethi nyaniso - baqala ukwenza ukuzikhusela kwaye bacaphuke kakhulu. Ngoku unokucinga ukuba ii-Aries ezimbini ziya kujongeka njani kunye ukuba azinyanisekanga? Mhle njengabantwana ebaleni lokudlala abalwa nto kwaphela, ngelixa begcina ukusondelana okungekokwendalo ukuthomalalisa iimvakalelo zokuziva unetyala.
Ngale nto ithethwayo, sinokubanga ngokuqinisekileyo ukuba ii-Aries ezimbini kubudlelwane bothando zabelana ngokuthembana njengenjongo enye. Ungathembeli kuphela kwinto ethethwa ngomnye umntu, kodwa okona kubaluleke kakhulu, uthembele ukuba uvule kwaye uthethe oko kusengqondweni yakho ngaphandle koloyiko lokusabela kweqabane labo. Kwiimeko ezininzi, iqabane lika-Aries aligcwali luthando kunye nenkxaso ngenxa yokungabi nabuchule kunye nokungxama. Esi sesona sizathu siphambili sokuba kutheni ii-Aries ezimbini kubudlelwane zingasoloko zisebenza.
Aries & AriesUnxibelelwano kunye nengqondo
Yiba nomfanekiso-ngqondweni wabantu ababini abahle, abahamba ze, bebetha iintloko zabo eludongeni lwezitena. Ngamanye amaxesha lo ngowona mfanekiso ubalaseleyo ukwenza ukuba uqonde i-mindset ye-Aries, ngakumbi xa kukho ezimbini kubo, ukuxubusha ingqondo. Ubukrelekrele abunanto yakwenza nomfanekiso, njengoko banokuba krelekrele kakhulu ngenxa yokuba nokwenzeka kwesikhundla seMercury kuphawu lwabo, kodwa uhlobo oluthile lwenkani engaqhelekanga lunokubenza bangabi nangqiqo.
Ingqondo yesiqhelo ye-Aries inohlobo lwesidingo sokuhlala ungqina into kwabanye. Ngoku oku kungakuhle ukuba ingxoxo ibinokuzola, ukucinga okunengqiqo njengesiseko, kodwa naxa iingxoxo zabo zisemthethweni, abanakubonakala bezolile kwaye bekude ixesha elide ngokwaneleyo ukuze bavakalise uluvo lwabo.
Icala elilungileyo lale ndibaniselwano ngokwenene yindawo efanayo yeLanga njengophawu lokwazisa, ngoko unokubona ukuba ukugxila kwabo okuphambili akuhlukanga kangako. Sekunjalo, kunzima ukuba ababini kubo bafumane uxolo ekunxibelelaneni, ngaphandle kokuba babelana ngeembono ezininzi ezifanayo.
I-Mars, umlawuli wabo, uphantsi kwamandla aphantsi - iplanethi yobundlobongela. Xa uzama ukuqhobosha inkcazo yangaphambili kwisibini sakho se-Aries, usenokungayifumani isebenzayo. Kodwa ukuba ujonga kwakhona, unokubona zonke iintlobo zobundlobongela obufihliweyo phakathi kwabo, ngakumbi ukuba badiniwe. Iba ngathi bayiqhelile kwaye ngoku basebenza nje ngale ndlela. Jonga kwakhona – isenokuba yeyasemzimbeni okanye yomlomo, iyasebenza okanye yenziwa. Ikhona?
Aries & AriesIimvakalelo
Ngenxa yokungabi namonde kwabo kulula ukucinga ukuba abameli be-Aries abanamvakalelo kakhulu. Akukho mntu ungcono kunomnye u-Aries ukuqonda ukuba le ngcinga ayiyonyani. Njengophawu loMlilo, i-Aries ishushu kwaye inomdla kodwa kunokuba nzima kancinci ukuqonda icala labo elithambileyo ngenxa yendalo yabo ebonakala ngathi yeyobudoda kunye nejoni. Ama-Aries amabini anokwabelana ngokuqonda okunzulu ngokweemvakalelo ngokungathi bathetha ulwimi olunye.
Ngelishwa, iLanga liphakanyisiwe kwi-Aries kwaye ihlala ishushu kakhulu ekusebenzeni kwayo okulinganayo. Ukuba iLanga lesibini lingangena kwisijikelezi-langa sethu, ngaba unokuthelekelela ukuba luhlobo luni lomonakalo onokwenziwa ngumxhuzulane walo? Oku kuthethiweyo, unokuqonda ukuba kulula ukuba kunye nomntu olawulwa yiplanethi xa wena ngokwakho uyinkwenkwezi. Ayisiyonto yokuba olu lwalamano lweemvakalelo alunakwenzeka, kodwa ngamanye amaxesha kunokuba nzima kuwo omabini amaqela ukuba azimele, omelele kwaye anyaniseke kuziqu zawo.
Aries & AriesImilinganiselo
Eyona nto i-Aries ixabisa kakhulu kukukwazi komntu ukuba aqonde kwaye acace, ngoko ke ama-Aries amabini aya kuqondana ngokugqibeleleyo kulo mbandela. Ukuba bayavumelana ngezinto ezithile, oko kuyathandabuzeka. Ngenxa yobume babo bokuqala, bayathanda ukuzibona njengabalweli bobulungisa. Oku kubanika umbono oqhelekileyo weRobin Hood, ngoko ke kunokwenzeka ukuthetha ukuba bayayixabisa inyaniso, imbeko kunye nentlonipho. Oku kuya kuba ngaphandle komxholo kwaye ngaphezulu kwenkcazo ngokubanzi yexabiso labo. Amaxabiso naluphi na olunye uphawu olunokuba nawo, kodwa ungabi nawo umdla ngawo.
Aries & AriesImisebenzi ekwabelwana ngayo
I-Mars yenza abantu basebenze, ngoko masithi banokubelana ngayo yonke into ebonakalayo, ukusuka ekuhambeni, ezemidlalo kunye nesondo, ukuya entabeni. Imisebenzi ekwabelwana ngayo ifumaneka lula kolu budlelwane ngenxa yohlobo lwamandla afanayo kunye nokubanakho.
Xa ii-Aries ezimbini zidibana, kunyanzelekile ukuba omnye wabo abenolwazi lokuhlala ezolile. Ukuba oku kuphunyezwa ngomnye wabo, kungekuko ngokuba nogonyamelo kodwa ngokucinga okusengqiqweni, ulwalamano lwabo lunokuba nomvuzo ngokwenene. Njengabantu ababini abafudumeleyo nabanomdla, banokwabelana ngamaxesha amaninzi okuzonwabisa aphakamisa amanqanaba abo amandla esibhakabhakeni. Ukuba, nangona kunjalo, akukho namnye kubo onale ngqiqo, isakhono esikhulileyo, kunokwenzeka kuphela ukwandisa ubudlelwane babo ngokusekelwe kwimisebenzi yangaphandle kunye nesondo, kunjalo. Ukusukela uphawu lwe Aries ithatha uSaturn, umlawuli osisilumko wexesha, umonde kunye noxanduva lokulimaza, omnye wala maqabane kuya kufuneka afunde isifundo kwaye athathe uxanduva lwekamva lobudlelwane babo ukuba baya kuhlala ixesha elide.
I-Scorpio Khetha Uphawu Khetha Uphawu Pisces Capricorn